Ny toerana 10 tsara indrindra amin'ny 2016 araka ny Lonely Planet (II) | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | General, mpitarika, Tsangatsangana
Raha tamin'ny andro hafa dia nilaza taminay ny dimy voalohany Toerana 2016 araka ny Lonely PlanetAnio kosa dia anjaran'ny dimy hafa izay tsy hita intsony. Ary ny tena tianay indrindra amin'ity lisitra ity dia ny fizahan-tany ho an'ny tsiro rehetra, manomboka amin'ny toerana an-tanàn-dehibe misy tantara maro ka hatrany amin'ny tanàna mavitrika, firenena anaty ala na toetr'andro mangatsiaka be. Andao fa tsy hijanona amin'ny toerana tropikaly mahazatra isika.
ireo Torolàlana ho an'ny Planet irery Izy ireo no be mpampiasa indrindra, ary nanome ny heviny izy ireo ka ireo toerana ireo no voafidy ho tsara indrindra amin'ity taona ity. Mino izahay fa na dia manao laharana aza izy ireo, ny firenena tsirairay dia samy manana ny mahasarika azy manokana, tsy misy tsara noho ny iray hafa, ary raha ny marina dia aleoko ny isa enina, izay nanombohanay ity fizarana faharoa ity, ho tena tiako indrindra. Inona ny anao?
La Trano Opera any Sydney, koala ary kangaroos, any afovoan'i Aostraliana miaraka amin'ny vatolampy Uluru, milalao didgeridoo. Ireo rehetra ireo dia zavatra tiako ho hitako na hataoko, satria toerana hafa tanteraka i Aostralia, manana biby manokana aza izy, ary ny vahoaka Aborigine, satria nihataka tamin'izao tontolo izao nandritra ny taonjato maro. Araka ny fantatrao tsara, izy io dia nampiasaina ho toerana hakana gadra nandritra ny fotoanan'ny fanjanahantany, saingy androany dia toerana feno kolontsaina mivory, ary zavatra mahaliana maro.
Betsaka ny zavatra ilaina raha mandeha any Aostralia isika, ary ny iray amin'izy ireo dia ny mitsidika an'i Sydney hijerena ny Opera sy ny bay, hitsidika ny manodidina an'i The Rocks, na mandro ao amin'ny Beach Bondi malaza. Ny faritra voajanahary azo tsidihina dia haharitra iray volana, fa misy ny sasany manokana, toy ny Great Barrier Reef ao amin'ny faritr'i Queensland, na mankany amin'ny Red Center, any amin'ny faritany avaratra, hahitanao ny tontolo malaza miaraka amin'ny Vato Uluru. Misy ihany koa ireo valan-javaboary voajanahary, toa an'i Kakadu na Namadgi, feno natiora amin'ny tsara indrindra.
Poloney dia toeran-kafa eoropeanina ho an'ny 2016, ary manome ihany koa ny hatsaran-tarehy eropeana avy amin'ny tanàna misy tantara maro. Mitsidika Warsaw, renivohitra, dia tsy maintsy atao, ary eto no ahitantsika tanàna iray namboarina tanteraka taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, saingy nahitan'izy ireo nitahiry ny fomba rehetra nananany. Izy io dia renivohitra ara-kolotsaina izay misy teatra sy tranombakoka maro, toy ny Grand Opera House, ary toerana iray anaovana hetsika ara-kolontsaina manan-danja ihany koa, toy ny International Jazz Meeting. Ny fitsidihana hafa dia ny lapan'ny nosy na ny lapan'i Belvedere. I Krakow, renivohitra taloha, dia toerana mahaliana ihany koa, miaraka amina tanàna tranainy nambara ho toerana arovan'ny Tantara Universal. Eto no ahitantsika ny tsena medieval lehibe indrindra any Eropa, na ny trano fisakafoanana Wierzynek, ilay tranainy indrindra any Eropa izay mbola mihetsika.
Io no hany toerana any Amerika atsimo izay tafiditra ao anaty lisitra, ary firenena milamina ara-politika izy io ary manana fanambinana sy filaminana ary fandraisana olona ao aminy. Montevideo no renivohiny, amoron-tsiraka, ary manana toerana toa ny Plaza de la Independencia na Palacio Salvo. Izy io koa dia manana moron-dranomasina, dia ny an'i Pocitos, hankafizanao masoandro kely. Amin'ny Punta del Este dia hahita spa miavaka indrindra ianao ary rendrarantranon'ny firenena. Ary raha te hiverina amin'ny fotoana mahamety azy ianao dia tsy maintsy mitsidika an'i Colonia del Sacramento, miaraka amina Quarter Historic izay UNESCO World Heritage Site.
Ho an'ireo izay tsy matahotra hangatsiaka dia ity no làlana tsara indrindra, an'ny Fanjakan'i Danemark. Betsaka ny zavatra azo atao any Greenland, ao anatin'izany jereo ny jiro avaratra malaza, izay hita manerana ny firenena, na mandeha mamakivaky ny Icefjord, glacier izay mipaka any amin'ny faritr'i Ilullisat, izay ahafahanao mandray sambo hahita ireo andiana ranomandry lehibe ireo. Azonao atao ihany koa ny mitsidika an'i Nuuk, renivohitra, izay misy tranombakoka misy zavakanto Greenlandic ahafahantsika mianatra zavatra momba ny tantaran'ny toerana. Malaza be koa ny fitsangantsangana, satria zara raha misy ny arabe ary tsara tarehy loatra ny toerana voajanahary ka tsy hita.
Ity dia iray amin'ireo paradisa sy toeran-kafa hafahafa izay hitantsika ato amin'ity lisitra ity. Any Fiji dia misy nosy hatramin'ny 333 azo jerena, na dia vitsy aza no malaza indrindra. ny lehibe indrindra dia Viti Levu, ary ao anatiny, ankoatry ny morontsiraka misy hazo rofia, misy tanàna kely misy tranombakoka sy hetsika. Ao anatin'izany dia afaka mankafy fitsangatsanganana voalamina koa isika, miaraka amin'ny fiakarana na fitsangatsanganana mamakivaky ny ala. Etsy ankilany, manana ny vondrona nosy Yasawa niavian'ny volkano ianao. Manana morontsiraka sy farihy fotsy misy aloky ny turquoise izy ireo. Anisan'izany ny Island of the Turtles, izay nalaina sary ny seho sasany an'ny 'El Lago azul'.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Toerana 10 tsara indrindra amin'ny 2016 araka ny Lonely Planet (II)
Izay tokony ho fantatrao handehanana any Seychelles